Fampisehoana YouTube 6 izay tokony ho fantatry ny mpamorona atiny rehetra - YTpals
Mividy mpanolotra YouTube
Hividy YouTube Deal
Hividy YouTube Watch Hours
Hividy YouTube Views
Hividy YouTube Likes
Hividy fanehoan-kevitra YouTube
Hividy YouTube Shares
Vidio ny Embeds YouTube
Vidio ny fanombanana ny fantsona YouTube
Vidio SEO Video YouTube
Vidio ny endrika sary an'ny YouTube
Buy Instagram mpanaraka
Mividy mpanaraka automatique ho an'ny Instagram
Hividy Instagram Likes
Hividy automatique ho an'ny Instagram
Hividy Instagram Views
Vidio ny Instagram Comments
Mividianana fifanarahana varotra Instagram
Mpanaraka Twitch maimaim-poana
Mividy mpanaraka ny Twitch
Vidio ny sarin'ny Twitch Channel
Vidio ny mpankafy / mpanara-dia an'i TikTok
Mividy fijery TikTok
Vidio ny Fizarana TikTok
Vidio ny tsikera TikTok
Mividy mpanaraka SoundCloud
Hividy SoundCloud Comments
Mividy mpanaraka ny Spotify Playlist
Mividy mpanaraka mpanaradia
Ny baiko taloha
Makà Mpanjifa YouTube maimaim-poana
Fampisehoana YouTube 6 izay Tokony ho Fantatry ny Mpamorona Votoaty Rehetra
YouTube dia manana fiasa marobe izay azon'ny mpamorona horonan-tsary ampiasaina hanampiana azy ireo amin'ny asany sy ny tetikasan-dahatsary. Ny sasany amin'ireo fiasa ireo dia natao hanampiana anao hisarika fomba fijery misimisy kokoa raha mamela anao hahita ny fizotran'ny fantsonao. Ireto ny fampisehoana 6 ambony YouTube izay tokony ho fantatry ny mpamorona atiny rehetra.
Channel dashboard / Studio YouTube
Ny fiasa voalohany dia ny dashboard fantsona, fantatra amin'ny anarana hoe YouTube Studio. Eto ianao dia mahazo topy maso momba ny fantsonao, manomboka amin'ny fampisehoana ny horonan-tsarinao ka hatrany amin'ny toerana misy ny mpanjifanao, ary ianao koa mahazo ny vaovao farany, ny fironana ary ny fanavaozana izay mahazo vahana indrindra amin'ny YouTube.
Ny dashboard fantsonao dia ny endri-javatra izay hanana ny ankamaroany, raha tsy ny fiasa rehetra izay tanisainao eto. Raha te hiditra azy dia ny tsindrio ny bokotra manga YouTube Studio ao amin'ny fantsonao fotsiny.
Analytics dia kiheba ao amin'ny YouTube Studio, araka ny anarany, afaka miditra amin'ny angon-drakitra momba ny fampisehoana ny tsirairay amin'ny horonan-tsarinao ianao ary koa ny fantsonao amin'ny ankapobeny. Eto ianao dia afaka mahita ireo karazana horonantsary mahazo fomba fijery sy firotsahana bebe kokoa ary iza amin'ireo no tsy mandeha tsara, ankoatry ny angona hafa. Ity fahitana sarobidy ity dia afaka manampy anao handray fanapahan-kevitra tsara momba ny fandraharahana sy ny famoronana izay misy fiatraikany amin'ny paikadinao amin'ny marketing eo amin'ny YouTube.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nampiditra data izay milaza aminao koa ny YouTube raha vao voalohany no misy ny mpihaino anao. Midika izany fa hahafantaranao hoe ora inona ao anatin'ny herinandro no mavitrika indrindra ny mpihaino anao.
Famerenana hevitra tsy mendrika
YouTube dia manome ny tompona fantsona safidy hijerena ireo fanehoan-kevitra tsy mendrika amin'ny horonan-tsary. Manampy ny mpamorona horonantsary ity hifehy tsara kokoa ny fizarana fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsarin'izy ireo, hitarika ny fanehoan-kevitra mankany amin'ny feo tsara kokoa ary hanatsara ny kalitaon'ny resadresaka amin'ny fantsona.
Tamin'ny voalohany, ny famerenana ireo fanehoan-kevitra tsy mendrika dia sehatra tsy voatery. Na izany aza, ny YouTube dia nanao azy io ho toerana misy anao ankehitriny. Raha vao natsangana ity endri-javatra ity dia nihena 75 isan-jato ny fanehoan-kevitra navoaka tamin'ny fantsona izay nanana ny toe-javatra.
Ny fizarana horonan-tsary dia ahafahanao manaparitaka ny horonan-tsarinao YouTube ho toko hafa hahafahan'ny mpijery mitsambikina amin'izy ireo.
Misy fepetra iray ihany raha toa ka hampiasa an'ity endri-javatra ity ianao. Tsy maintsy misy eb farafahakeliny toko telo ao amin'ilay horonan-tsary, ary ny toko tsirairay dia tokony ho 10 segondra farafahakeliny. Raha te hampiasa an'ity endri-javatra ity ianao dia tsy maintsy manampy timestamp amin'ny famaritana horonantsary ary alao antoka fa manomboka amin'ny 0:00 marina ilay voalohany.
Fitaovana YouTube SEO
YouTube dia mety tsy namorona endri-javatra toy ny famaritana video, lohateny video ary lohateny playlist, tag ary pejy About ho fanatsarana ny horonantsarinao ho an'ny motera fikarohana, saingy manamboatra fitaovana SEO tsara izy ireo, tsy ao anatin'ny YouTube ihany fa ho an'ny Google sy koa. milina fikarohana hafa.
Rehefa tonga miaraka amina lohateny manana teny fanalahidy mety sy famaritana horonantsary izay nosoratana fohifohy mba hanehoana ny momba ny atin'ny horonantsaryo ianao dia manome ny motera fikarohana hevitra momba izay atolotray ny vidéo ianao mba hahafahany manome soso-kevitra azy io rehefa mikaroka mifandraika ny mpampiasa teny lakile
Fandaharam-potoana ny paositry ny fiarahamonina
YouTube dia mamela anao handamina ny paositry ny vondrom-piarahamonina, izay midika fa afaka mandrafitra diarin'ny vondrom-piarahamonina mialoha ianao ary mamaritra ny ora sy daty anaovanao azy. Avy eo dia havoakan'ny YouTube avy hatrany ny lahatsoratra. Ity endri-javatra ity dia tsy azo idirana afa-tsy amin'ny rindrambaiko finday birao.
Ampiasao ireo endri-javatra ireo hanatsarana ny lalao marketing YouTube anao ary hahasoa indrindra, tokony hatolotra ny sehatra fizarana horonantsary!
Fampisehoana YouTube 6 izay Tokony ho Fantatry ny Mpamorona Votoaty Rehetra avy amin'i YTpals Writers, 21 Oktobra 2020
Ao amin'ny YTpals ihany koa
Torohevitra 10 ambony indrindra amin'ny fampiasana YouTube ho an'ny orinasa madinika
Orinasa kely ve ianao izay liana amin'ny fanaovana splash lehibe amin'ny YouTube? Eny, tonga amin'ny toerana mety ianao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hitondra anao amin'ny toro-hevitra YouTube 10 tsara indrindra izahay isaky ny kely…
Fomba 5 ahazoana mailaka haingana ny mpanjifa YouTube - Torolalana
Rehefa mitombo haingana dia haingana ny fiantraikan'ny YouTube sy ny isan'ny mpampiasa, dia nanjary mazava fa ny sehatra an-tserasera an-tserasera an-tsehatra ambony dia mitazona fotoana isan-karazany ahazoana tombony. Avelan'ny YouTube hisy…
Ahoana ny fomba hanaovana fampielezan-kevitra amin'ny fanangonana vola amin'ny YouTube?
Ny fanangonam-bola dia mety ho dingana lava sy mandreraka rehefa vita tsy misy drafitra ampy. Na izany aza, tsy voatery ho izany foana. Ny fampielezan-kevitra amin'ny fanangonana vola amin'ny YouTube voaomana tsara dia hisarika ny besinimaro ary hiantoka anao…
Midira amin'ny fampiofanana maimaim-poana izao
Mazava ho azy fa fampiofanana:
YouTube Marketing & SEO hahazoana fomba 1 tapitrisa
Zarao ity lahatsoratra bilaogy ity mba hahazoana fidirana maimaim-poana amin'ny fiofanana horonantsary mandritra ny 9 ora avy amin'ny manam-pahaizana YouTube.
Mila manam-pahaizana momba ny YouTube ve ianao hamita ny fanombanana lalindalina ny fantsona YouTube anao ary hanome anao drafitra asa?
Manome manam-pahaizana izahay Serivisy fanombanana ny fantsona YouTube
Fakantsary tsara indrindra ho an'ny Mpamorona YouTube Vaovao
Fomba 5 ambony indrindra hahazoana mpijery haneho hevitra amin'ny horonan-tsary YouTube-nao
Fomba tsara hampiasana YouTube ho sehatra varotra
Soso-kevitra amin'ny fandrafetana ny fandaharam-potoananao amin'ny famoahana YouTube
Inona no tetika loko tsara ho an'ny fantsona YouTube anao?
Te hanampy ny manam-pahaizana YouTube ve ianao?
Avelao ireo manam-pahaizana YouTube hanoratra ny tenany fa mandinika tanteraka ny fantsonao rehefa manome anao torolàlana lehibe hanatsarana izany amin'ny lafiny rehetra izy ireo.
Eny, mila fanampian'ny manam-pahaizana aho!
Manolotra serivisy marketing YouTube bebe kokoa izahay
Service 50 YouTube mpizara ($ 20) 100 YouTube mpizara ($ 30) 300 YouTube mpizara ($ 45) 500 YouTube mpizara ($ 60) 1000 YouTube mpizara ($ 100) 2000 YouTube mpizara ($ 180)
Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona
Fitaovana azo antoka
Fandefasana azo antoka sy manokana
Fandefasana STARTS amin'ny 24-72 ora
Fandaharana LOHATENY isan'andro mandra-pahatonga
Fividianana be indray mandeha - tsy misy fiverimberina
Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona
Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona
Service 500 YouTube Watch Ora ($ 180) 1000 YouTube Watch Ora ($ 300) 2000 YouTube Watch Ora ($ 450) 3000 YouTube Watch Ora ($ 550)
Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona Atao anaty harona
Olona iray ao nividy
YTpals dia vahaolana lehibe amin'ny Media Media Marketing ho an'ny fantsom-barotra sy fantsona YouTube manokana. Manampy ny mpanjifanay izahay hahazo bebe kokoa ny mpanjifa, ny fomba fijery, ny tiana ary ny fanehoan-kevitra hampitombo ny fiantraikany amin'ny Internet.
Copyright © 2022 YTpals (ytpals.com). Zo rehetra voatokana. Sitemap
Faritra ho an'ny mpikambana
Mampiasa mofomamy ity tranokala ity mba hahazoana antoka fa hahazo ny traikefa tsara indrindra ianao.